I-Android 5.0 ikuvumela ukuba uvule kwaye ucime isibane sakho, i-wi-fi kunye nebluetooth nge-google ngoku imiyalelo
Eyona Iindaba Kunye Nohlolo I-Android 5.0 ikuvumela ukuba uvule kwaye ucime isibane sakho, iWi-Fi kunye neBluetooth ngokusebenzisa imiyalelo kaGoogle ngoku
Kude kube ngoku, abasebenzisi be-Android abafuna ukusebenzisa ifowuni njengethotshi kuya kufuneka basebenzise le ibonelelwe ngumenzi, okanye bakhuphele usetyenziso kwiVenkile yeGoogle Play. Kwiziphatho eziphathwayo ze-Android ezine-Android 5.0 efakiweyo, umyalelo kaGoogle ngoku unokuvula ifowuni kunye neefosits zento ekhanyayo ngokuthetha 'Khanyisa isibaneUnokuthi 'Cima isibaneukucima isibane. NgeLollipop, uGoogle ngoku uya kusebenza neminye imiyalelo enje 'Layita(kwaye ucime)IWi-Fikunye 'Layita(kwaye ucime)ibluetooth. '
Ngaphandle kokufumana ingxelo yeaudiyo yomyalelo ngamnye, ikhadi likaGoogle ngoku liya kuvela ngokutshintsha ngaphakathi kuyo ukuze ukwazi ukutshintsha ngokukhawuleza isenzo osicelileyo. Eminye imiyalelo enje ngeyokucima / ukucima imowudi yenqwelomoya, ukuqaqamba okanye ivolumu ayisebenzi. Endaweni yesicelo sakho kuGoogle ngoku uzisa utshintsho olunqwenelekayo, umsebenzisi uthunyelwa kwisethingi yesetingi ukutshintsha ngesandla useto ngalunye.
Nasi esinye isizathu sokuba abo baneKitKat bajonge phambili ekubeni nefowuni yabo iLollipopped. Nje ukuba une-Android 5.0 kwifowuni yakho, unokufuna nje ukususa olo dumileyo 'Ukuqaqamba kweTlash Free'app esele ifunyenwe Xela indawo okuyo ngqo kunye nesazisi esinezixhobo ezizodwa kubantu besithathu kubandakanya iinethiwekhi zentengiso .
I-Android 5.0 ivumela abasebenzisi ukuba bacele uGoogle ngoku ukuba akhanyise isibane
umthombo: AndroidPolice nge AndroidCentral
Iimephu zeGoogle iimowudi zokuqhuba ios
ipad pro 2021 umhla wokukhutshwa
I-nexus 6p vs i-samsung inqaku 5
Abasebenzisi abaninzi be-iPhone bahlangabezana nemicimbi emanyumnyezi yokukhupha ibhetri emva kohlaziyo lwe-Apple kunye neapos;
Ezona zikhuseli zibalaseleyo kwiGoogle Pixel kunye nePixel XL
Inkxaso yokubhatala yenethiwekhi yeGoogle Play Store yongezwa kwiBoost Mobile eUS
Ityala laMandla okuQala kwakhona kwe-Otterbox yokuphononongwa kwe-iPhone 5 / 5s
I-Apple ithathele ingqalelo ukukhupha uHlelo oluBomvu lweApple yoHlelo lweApple
I-Apple ityhila i-iPhone X iqhosha lasekhaya elongezayo nge-ID yokuChukumisa kunye ne-headphone jack
NgoMvulo oluhlaza ngokuthenga okungcono: Thenga i-iPhone 7 okanye iGPS S7 ngexabiso eliphantsi njenge- $ 1 ngesivumelwano esisayiniweyo